Namoaka ny 105in Samsung voahenjana UHD TV ao amin'ny mihazakazaka ho amin'ny CES - News Fitsipika
Namoaka ny 105in Samsung voahenjana UHD TV ao amin'ny mihazakazaka ho amin'ny CES
Koreana fitaovana Mpanao kiraro Samsung dia nanambara izany dia hanomboka zavatra izany milaza ny “eran-tany voalohany” 105in hiringiriny-ambony malgache (UHD) curved efijery TV amin'ny CES 2014 Las Vegas ao amin'ny volana manaraka.
Ny curved Samsung 105in TV dia mety tsy hahatratra UK morontsiraka
Vaovao tsara ho an'ireo izay tia azy ireo voahenjana, toy ny Samsung touts ridiculously izany salantsalany miseho toy ny “izao tontolo izao indrindra curved” TV, manome azy io efa ho roa heny ny sary kalitaon'ny fitsipika fisaka-tontonana UHD milentika rehefa jerena avy amin'ny lafiny. Ny sehatra kely ny maika mirehareha iray 11 tapitrisa Pixel (5120×2160) efijery vahaolana miaraka amin'ny 21:9 aspect tahan'ny.
“Ny Samsung 105in Curved UHD TV mandany vaovao tsara algorithm sary format manan-tompo izay manafaka optimisé loko sy fahatsapana lalina kokoa,” Samsung Nirehareha.
Ny 105-incher ihany koa amin'ny Samsung naorina ny “Quadmatic Picture Engine” teknolojia, izay ny Koreana hoy mafy mamonjy ny votoaty rehetra amin'ny UHD-anivon'ny toetra sary na inona na inona ny loharanom-baovao dia.
“Toy ny curved tontonana efa grady sy TV teknolojia faritra no nanampy, ny fitambaran'ny ny grady curved tontonana amin'ny sary lehibe kokoa toetra maotera manome ny farany immersive traikefa,” ny orinasa nanampy.
Rehefa Te antenaina avy amin'ny toy izany unobtainable kely ny teknolojia ho toy izany, Samsung tsy mbola namoaka vaovao misy eo amin'ny fisian'ny Pricing na ny curved TV napetraka. Toy matetika no nitranga tamin'ny Ireo mampideradera hevitry ity sokajy ity, mety ho ny TV manomboka ao Korea Atsimo indraindray in 2014, fa tsy tonga ny vahiny morontsiraka.
Na dia izany aza, dia ho amin'ny fampisehoana amin'ny CES avy 7-10 Janoary ho an'ireo tsara vintana ho hanatrika
27770	0 CES, nanontany, International CES, LG Corp., Samsung, televiziona, UHD, Ultra avo famaritana fahitalavitra
← 'Ny andro ahafatesana,’ famantaranandro nilaza hopitaly marary Top 10 Sakafo ara-pahasalamana Tsikombakomba →